Afghanistan v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at Bulawayo, Mar 4 2018International Cricket Council
20 PhotosGallery 04 Mar 18
Afghanistan v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at Bulawayo, Mar 4 2018
Brad Wheal of Scotland celebrates with teamates after taking the wicket of Inhsanullah of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Najibullah Zadran of Afghanistan plays a shot during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Nasir Jamal of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
M Nabi of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Richie Berrington of Scotland celebrates with teamates after taking the wicket of Rahmat Shah of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Calum MacLeod of Scotland plays a shot during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Kyle Coetzer (R) of Scotland is stumped by M Shazad (L) off the bowling of Mujeeb Ur Rahman (unseen) of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Kyle Coetzer (R) of Scotland looses his wicket to Mujeeb Ur Rahman (unseen) of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
M Nabi of Afghanistan reacts after being run out on 91 during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Brad Wheal (L) of Scotland celebrates taking the wicket of Mujeeb Ur Rahman of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Safyaan Sharif (R) of Scotland reacts during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Calum MacLeod of Scotland player of the match the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
George Munsey (R) of Scotland plays a shot past xx of Afghanistan during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Calum MacLeod (L) celebrates with George Munsey of Scotland after reaching his 150 during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Calum MacLeod (C) and George Munsey (L) of Scotland celebrate after the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Calum MacLeod (centre left) and George Munsey of Scotland celebrate after the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.
Dawlat Zadran (L) of Afghanistan plays a shot during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Afghanistan and Scotland at the BAC Stadium on March 4, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe.